२०७७ सालमा १८ कम्पनीको आईपिओ जारी : कुन आईपिओबाट कति मुनाफा ? | शुभयुग
२०७७ सालमा १८ कम्पनीको आईपिओ जारी : कुन आईपिओबाट कति मुनाफा ?
७०७ पाठक संख्या
१ बैशाख,काठमाण्डौ – आईपिओमा नयाँ लनागीकर्ता भित्रिएको हिसाबले यो बर्ष २०७७ लाई आइपिओका लागि स्वर्णिम युग मान्न सकिन्छ ।
केहि समय पहिलेसम्म पनि १० लाखभन्दा कम संख्यामा रहेका डिम्याट खाताको संख्या अहिले ३३ लाख नाघिसकेको छ ।
आइपिओबाट लगानीकर्ताहरुले के कति मुनाफा हासिल गरे त ?
प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्स